Laravel 5.2 ကို upgrade ပြုလုပ်ခြင်း - LaravelMyanmar Forum
Laravel 5.2 ကို upgrade ပြုလုပ်ခြင်း
Laravel 5.2 ကို upgrade ပြုလုပ်ဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံရှိကြလားမသိဘူး။ ကျနော်က အခုအရှေ့က developers တွေက 5.2 နဲ့ရေးခဲ့ကြလို့။ အခု 5.2 က deprecated ဖြစ်သွားပီဆိုတော့ upgrade လုပ်ရတော့မှာမို့လို့ပါ။ Documentation ကိုဖတ်ပြီးလုပ်တာလဲ သူတို့ပြောတာသိပ်နားမလည်တာကြောင့် လုပ်မရဘူးဖြစ်နေလို့။ အဲ့တာ Upgrading ကို မြန်မာလိုရေးထားတာလေးများမရှိကြဘူးလားခင်ဗျ။
poeti1102 ကျွန်တော်တောက်လျောက် Upgrade လုပ်လာတာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘရို။ ဘယ်လို error တက်နေလို့လဲ။ ပုံမှန် 5.2 ကနေနောက် version ပြောင်းတဲ့ကောင်ကို tutorail ရေးရင်ဘာမှသိပ်မထူးဘူးဘရို။ တကယ့်ကိုယ့် application ဘယ်လောက် custom လုပ်တယ်ဆိုတာတွေပေါ်လည်းမူတည်လိမ့်မယ်။
upgrade guide ကိုနားမလည်ရင် နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဘရို။ အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်ဖူးလို့။
setkyar ဟုတ်တယ်ဗျ . Application က customize တော်တော်လုပ်ထားတာ. ဥပမာပြောရရင် multiauth ပုံစံပါတယ်. Ecommerce ပါ application က. Backend login အတွက်ကျတော့ နဂိုရှိပီးသား user table ပဲသုံးထားပီး frontend (customer) login အတွက်ကျတော့ သီးသန့် table သုံးထားတယ်. အဲ့တာကလည်း manual ပုံစံရေးထားတာ. Login ဝင်ရင် session ထဲကို့ဘာကိုမှတ် ကို့ဘာကို logout ပြန်ရေးနဲ့ အဲ့လိုတွေတော်တော်များများ manual တွေရေးထားလို့ပါ.အဲ့တာကြောင့် myanmar လို upgrade guide လေးဘာလေးရှိမလားလို့ပါ